समस्याग्रस्त डडेल्धुरा विशेषज्ञ अस्पताल, पानी चुहिने समस्याले बिरामी र चिकित्सक हैरान – Mission Khabar
समस्याग्रस्त डडेल्धुरा विशेषज्ञ अस्पताल, पानी चुहिने समस्याले बिरामी र चिकित्सक हैरान
मिसन खबर १३ बैशाख २०७७, शनिबार १६:१२
काठमाडौं\_डडेलधुरा । सुदूरपश्चिम प्रदेशकै एक मात्र विशेषज्ञ अस्पताल डडेल्धुरा अस्पतालमा पानी चुहिने समस्याका कारण बिरामी मारमा परेका छन् । अकस्मात देशभर सक्रिय भएको बर्षासँगै अस्पतालको छाना चुहिएपछि समस्या ब्यहोर्नुपरेको हो । ।
अस्पतालको अन्तरङ्ग कक्षमा बाहिर परेजस्तैगरी पानी चुहिदा बिहिबार मात्रै पनि ६ शैयामा रहेका बिरामीलाई अन्यत्र सार्नुपरेको थियो ।
बिरामी तथा कुरुवाले अस्पतालभित्र पानी जमेका कारण पानी छल्दै बेडमा बस्नु परेको बताए । विशेषज्ञ अस्पतालका रुपमा हेरिने डडेल्धुरा अस्पतालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात पहाडी जिल्लाका बिरामी आउने गर्छन । लकडाउनका समयमा समेत दैनिक एक सयदेखि १ सय ५० बिरामीको उपचार गर्ने डडेल्धुरा विशेषज्ञ अस्पतालमा पानी चुहिन थालेपछि बिरामी मात्रै होइन चिकित्सक समेत हैरान छन् ।
अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जगदीशचन्द्र विष्टले भने नयाँ भवनको पानीसमेत पुरानो भवनको छानामा पर्ने र बाहिर निकास नभएपछि पानीभित्र पस्ने समस्या ब्यहोर्नुपरिरहेको छ । भौतिक संरचनाको अभावमा एचडिसिएस नामक गैरसरकारी संस्थाले अस्पताल स्थापनाका बेला निर्माण गरेको पुरानो जीर्ण भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्दा पानी चुहिने समस्या बर्षेनी दोहोरिदै आएको छ ।
पानी रोक्नका लागि विभिन्न प्रयास गरिए पनि धेरै पानी जम्मा हुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको दाबी गर्ने मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विष्टले निर्माणाधिन नयाँ भवन बनेपछि समस्या सामाधान हुने बताए ।
संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमको केन्द्र भागमा रहेको डडेल्धुरा अस्पताललाई विशेषज्ञ अस्पतालका रुपमा विकास गरेपनि भौतिक संरचनाको व्यवस्थापनमा भने ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।